Google Duo ga-eji nkesa ihuenyo na android | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | Noticias, software
Google Duo Ọ ghọọla nnwale nke iri na abụọ ụlọ ọrụ America na-eme nke ọma n'ahịa maka ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Mgbe odida nke Google Allo, nke yiri ka ọ gụwo ụbọchị ya ọnụ, ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya na mbọ ya na ngwa a ọzọ. Ọ na-eme ya na ọrụ ọhụụ na atụmatụ iji merie ndị ọrụ.
Ugbu a, anyị nwere nnukwu atụmatụ ọhụrụ na Google Duo. N'ihi na ngwa ahụ ga-enwetara ihuenyo ekesara. Akụkụ nke na-ekwe nkwa ịdị mma maka ndị ọrụ ma a bịa n'igosi foto, vidiyo ma ọ bụ ihe ndị ọzọ anyị chekwara na ngwaọrụ anyị n'oge oku vidiyo.
Google Duo bụ ngwa nke ụlọ ọrụ America chọrọ ndị ọrụ iji kpọọ oku vidiyo. Ọ bụ isi ojiji nke ya. Site ugbu a gaa n'ihu, nhọrọ ihuenyo a ga-amalite ijide ihe niile na ihuenyo nke ngwaọrụ anyị. Ọ ga - ezigara ya onye ọzọ anyị na ya na - eme oku vidiyo.
Site n'ime nke a, anyị nwere ike ịhụ na a ga-egosi ihe oyiyi nke onye na-eme mkparịta ụka na windo na-ese n'elu mmiri. Ka anyị nwee ike ịga n'ihu na-ekwu okwu mgbe anyị na-egosi ihe anyị nwere na ihuenyo. Na onyonyo dị n’elu, ị nwere ụzọ doro anya etu igwe ihuenyo ga-adị na ngwa ahụ.
Ndị ọrụ niile nwere Google Duo nwere ike iji ọrụ aỌ bụ ezie na nke bụ eziokwu bụ na ị ga-achọ ekwentị nwere ike ikwu inwe ike iji ya. Ebe ọ bụ na ọ bụ atụmatụ na-achọ ọtụtụ ihe site na ngwaọrụ n'onwe ya.
Ihe omume a gha acho Google Duo. Enweelarịrị ụzọ e si arụ ọrụ na etu esi arụ ọrụ nke ngwa ahụ. Ya mere, ọ bụ oge nke oge tupu ọrụ ahụ abata na eze. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịlele ya kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Google Duo na-eweta nkesa ihuenyo na gam akporo
Ebumnuche ihe kpatara eji eme EmDrive agaghị ekwe omume ịgba ọsọ ekpughere
Pokémon Go ga-emelitere ya na Alolan Pokémon